June | 2012 | Rev.U Min Lwin
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: အဦးသီး ေပးလွဴျခင္း.	Leaveacomment
သင်၏ဘုရားသခင်ထားဝရဘုရားသည်၊ သင့်အမွေခံစရာဘို့ ပေးတော်မူသောပြည်သို့ သင်သည်ဝင်စားသောအခါ သင်၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်၌ အဦးသီးသော အသီးအမျိုးမျိုးကိုယူ၍ ခြင်းတောင်း၌ထည့်ပြီးမှ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်တည်စရာဘို့ ရွှေးကောက်တော်မူသော အရပ်သို့သွား၍ ထိုကာလ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်သောသူထံသို့ ချဉ်းကပ်လျက်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုပေးခြင်းငှါ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့ ကျွန်ုပ်ရောက်ပါပြီဟု ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ယနေ့ ကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟု ယဇ်ပရောဟိတ်အား ပြောဆိုရမည်။- ယဇ်ပရော ဟိတ်သည်လည်း ခြင်းတောင်းကို သင့်လက်မှယူ၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ရှေ့မှာ ချထားရမည်။(တရားဟော ၂၆း၁-၄)
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။ အစ္စရေးလူမျိုး (သို့)ယုံကြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ၏စိုက်ပျိုးမြေ (သို့) မိမိ၏ခွန်အားဖြင့် လုပ်သောအလုပ်မှ ရရှိထားသော အဦးသီးသောအသီးကို ထာဝရဘုရားထံတွင် ဆက်သရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ တမန်တော် ရှင်ယာကုတ်က ကျွန်တော်တို့ကို အဦးသီးသော အသီးကဲ့သို့ ဖြစ်စေခြင်းငှါ ကျွန်တော်တို့ကို သမ္မာတရားအားဖြင့် ဖြစ်ဘွားစေသည်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်အရ ကျွန်တော်တို့သည် အဦးသီးသော အသီးအနှံများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆက်သနိုင်ဘို့ရန်သာ ကြိုးစားအားထုပ်ဘို့သာ ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဘုရားသခင်ကို ဆက်သရာတွင် ကျွန်တော်တို့၏ ငွေကြေး (ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့)၊ အချိန်၊ ခွန်အား၊ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အသက်တာတခုလုံးကို ဆပ်ကပ် ဘို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ မိမိတို့၏ငွေကြေးများ ပါဝင်ပေးလှူလိုက်သည်နှင့် လုံလောက်ပြီဟု ထင်နေကြသည်။ အသက်တာတခုလုံး ပေးဆပ်ပေးလှူသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ပေးလှူရာတွင် ၀တ်ကျေတန်းကျေ သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ စေတနာစိတ်နှင့် ပေးလှူဘို့ လိုအပ် ပါသည်။
စေတနာစိတ်နှင့် ပေးလှူသည့်တိုင် ထိုအလှူ (ငွေ၊ အချိန်၊ ခွန်အား)ကို ကိုယ်တိုင်ဆပ်ကပ်ပေးလှူနိုင်ခွင့် မရှိပါ။ အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် အလှူပစ္စည်းများကို ယဇ်ပရောဟိတ်က တဆင့်သာ ပေးလှူနိုင်ပါသည်။ ထိုအလှူပစ္စည်းများကို ယဇ်ပရောဟိတ် ထံပေးအပ်ရပြီး ထိုယဇ်ပရောဟိတ်က ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ ယူဆောင်သွားကာ ဆပ်ကပ်အပ်နှံပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပေးလှူ သော အလှူပစ္စည်းများကို ခရစ်တော် မှတဆင့်သာ ပေးလှူနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း အမှုပြုရာတွင် ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ ပြုလုပ်ခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့မှ ဘုရားသခင်ကို ပြန်လည်အပ်နှံသော မည်သည့်အရာမဆို ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ လက်ခံပါသည်။ အချို့သော သူများ၏ ပေးလှူမှုသည် အလွန်တရာ အံ့သြဘွယ် ကြီးမားများ ပြားသော ပမာဏ၊(သို့)ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှုများသည် လူအမြင်တွင် ကြီးမားလှသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ အမြင်တွင် ခရစ်တော်မပါသဖြင့် အရာမရောက်သော ပေးလှူအပ်နှံမှုများဖြစ်သည်ကို ၀မ်းနည်ဘွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါသည်။
အချို့သောလူများ၏ ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှုများသည် အားကျအတုယူဘွယ်ရာဖြစ်သည်။ အချို့သော ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှုများသည် မိမိအသက်ကိုပင် အပ်နှံကြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် သူတို့၏ ယုံကြည်မှုများအတွက် အသက်ကိုပင် စတေးခံကာ ဆပ်ကပ်အပ်နှံ နေကြသည်။ သို့သော် ထိုသူတို့သည် ခရစ်တော်မပါသဖြင့် အသက်ပင် အပ်နှံပေး လှူကြသော်လည်း အချည်းအနှီး ပင်ဖြစ်နေကြသည်။ မိတ်ဆွေ သင်သိကျွမ်းခွင့်ရသော ခရစ်တော်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ ထိုသခင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ပေးလှူဆပ်ကပ်ခွင့် ရရှိနေသည်ကို ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ အောက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကို လေ့လာပြီး ဆက်လက်ခွန်အားယူ ဆင်ခြင်ပေးပါ။
ညီအကိုတို့ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆပ်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကို ပြုမည့် အကြောင်း သင်တို့ကို ငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေသည်။
ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကို ထင်ရှားစေတတ်သော ဖြောင်မက်ခြင်းအကျင့်နှင့် သင်တို့သည် ပြည့်စုံ၍ ခရစ်တော်၏ နေ့ရက်တိုင်အောင် စိတ်ကြည်ဖြူလျက် တိမ်းလဲခြင်းအမှုနှင့် ကင်လွှတ်လျက် ရှိမည်အကြောင်းကို၎င်း၊ ငါဆုတောင်း ပဌနာပြု၏။